Nasiibdarada PSG iyo dhaawacyada Kylian Mbappe Iyo Neymar | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Nasiibdarada PSG iyo dhaawacyada Kylian Mbappe Iyo Neymar
Published on November 21, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(21-11-2018)Kooxda kubadda cagta PSG ayaa warkii ugu xumaa ee dhagaheedu maqli karayeen uu xalay usoo yeedhay xilli ay kaabiga kusoo hayso ciyaarta muhiimka u ah ee ay kaga bixi karto amaba ugu sii jiri karto tartanka UEFA Champions League oo Liverpool ay kusoo dhoweyn doonto magaalada Paris.
Halyeeyadeeda afka hore ee weerarka uga ciyaara ee Kylian Mbappe iyo Neymar ayaa xalay dhaawacyo kala duwan kasoo gaadheen ciyaarihii qaramadooda France iyo Brazil, waxaana labadaba garoonka laga saaray qaybtii hore.
Mbappe ayaa gargaar degdeg ah weydiistay dhakhaatiirta kooxda kaddib markii uu si xun dhulka ugu dhacay xilli ay hirdamayeen goolhayaha xulka qaranka Uruguay oo ay ciyaar saaxiibtinimo magaalada Paris ku wada ciyaareen.
Mbappe ayaa waxay isku dhaceen goolhayaha, kaddibna waxa uu wax ka noqday garabka gacanta midig oo u muuqday inuu u laabmay, daaweyn kooban oo gudaha garoonka loogu sameeyey kaddibna waxa dibedda la dhigay daqiiqaddii 36aad.
Xiddiga reer Brazil ayaa garoonka laga saaray toddoba daqiiqadood oo kaliya markii ay socotay ciyaartii xulka dalkiisu 1-0 kaga adkaaday Cameroon ee ka dhacay magaalada London, kadib markii uu xanuun ka dareemay muquqa lugta xilli uu isku dayey inuu laago kubbad uu ku bartilmaameedsanayey goolka xulka kasoo horjeeda.
Neymar ayaa gebi ahaanba ka baxay garoonka oo loo qaaday cusbitaalka iyadoo ciyaartu socota, waxaana xaaladdiisa war kasoo saari doona dhakhaatiirta xulka qaranka Brazil iyo kooxda PSG.
Kulanka muhiimka ah ee ay seegi karayaan
Toddobaadka soo socda waxay PSG magaalada Paris kusoo dhawayn doontaa Liverpool, waxaana kulankaas ay u baahan tahay guul khasab ah, haddii laga badiyana waxa suurtogal ah inay si rasmi ah uga hadho tartanka Champions League ee xili ciyaareedkan.
Ciyaartan oo qorshaysan Arbacada 28 November, ayaa waxa PSG walaac weyn ku abuuray dhaawacyada xalay usoo yeedhay.
Si kastaba ha ahaatee, dhakhaatiirta ayaa warbixino kasoo saari doona xaaladda labadan xiddig illaa maalinta Khamiista, kaas oo noqon doona mid ka farxiya amaba ka nixiya tababaraha iyo taageereyaasha PSG.